ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ? ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပါရာစီတမော(acetaminophen)ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဖျားနာသက်သာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့နာတဲ့အခါမှာသောက်ကြလေ့ရှိပေမယ့် မည်သို့မည်ပုံသောက်ရမည်ကိုသေချာမကွဲပြားသလို၊မည်သည့်ပမာဏသောက်ရမလဲဆိုတာကိုလဲ ဂဃဏန မသိကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်မလဲ၊ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲဆိုတာရှင်းလင်းသွားအောင်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။
-ပါရာစီတမောဟာ ရောဂါရင်းမြစ်ကိုမသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောဖျားနာခြင်းကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
-သာမန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဖျားနာ၍ခေါင်းကိုက်ခြင်းသာမက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါမှာပါ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
-အလွန်အမင်းမပြင်းထန်သော ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းများမှာ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
-အလယ်အလတ်ထက်မပိုသော အရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေမှာ ၎င်းကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
-ကလေး/လူကြီးမရွေး ဖြစ်တတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဖျားနာခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
-တစ်ရက်လျှင် ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်နိုင်ပါတယ်။
-၂၄နာရီအတွင်း ၄၀၀၀မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါ။
-ကလေးအလေးချိန်(ကီလို)ကို ၁၅နှင့်မြှောက်လျှင် တစ်ကြိမ်စာဆေးပမာဏရပြီဖြစ်ပါတယ်။
-(၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ် တိုက်နိုင်ပြီး တစ်ရက်လျှင် ၅ကြိမ်ထက်တော့ ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။